Indlela bunny igxuma ku-CC: iseluleko abadlali
Ingabe umusha Counter Strike, futhi bheka ngomona kuleyo abadlali bayathanda yikhangaru jumping kumephu futhi bazithola nganoma yingasiphi ngokushesha kunokuba? Wena ukhathele ukuthi njalo phambili ukubulala shot ekhanda ngesikhathi gxuma? Noma wena umdlali omuhle ofuna nje ukuthuthukisa (noma ngokugcwele master) ukulawula isikhundla emkhathini? Khona-ke lesi sihloko ukuphi, kungcono indlela yokwenza bunny hopping eKhotho yomThethosisekelo.
Ngakho jumping abadlali, iningi lawo ngokuthi "kangaroo", siqu amasu banihopa. Banihop (bunny igxuma ngendlela ehlukile) - kuyinto ukweqa okuqhubekayo kwimephu, okuvumela ukwandisa ukuthi lingakanani ijubane lokuya imodeli umdlali. Impendulo yombuzo zendlela yokwenza bunny hopping eNkantolo yoMthethosisekelo, kuyoba kancane, manje Ngithanda ukwengeza amazwana ambalwa:
Kumele ube nesineke ukuze ufunde futhi ucije amakhono banihopa.
Konke kuyofika, kodwa ngesikhathi esifanele. Amakhulu imizamo okuyimpumelelo kolwandle izithukuthuku, umsebenzi, ukukhuthala - futhi lapha, ukuthola inhlonipho nomona zabanye abadlali on the server.
Isinyathelo esilandelayo - kufanele wenze izinguquko ezithile eKhotho yomThethosisekelo:
Setha i-alias COP. Raspryg ingafakwa isondo igundane ke bunny igxuma uzokwenza lula kakhulu, asikho isidingo ucindezele lesi sikhala nzima, mina uqobo zisebenzisa isikhala njengoba inkinobho enza i-microphone. Obaba banihopa inkinobho "Jump" omi inkinobho yegundane kwesokudla, bathi kungcono elula kakhudlwana. Ukuze ukhethe Yebo, kukuwe.
Ukuze bunny hopping kuyasiza ukubeka ephezulu Sensei.
Ukuze ulawule ijubane console, thayipha umyalo olandelayo: cl_showpos. Umgomo we operation enembile.
Manje amaphuzu zendlela yokwenza bunny hopping eKhotho yomThethosisekelo:
Iya kunoma iseva nalutho, okungcono uthuli 2 ikhadi run ngqo DL, ekhuphukela plentu - lapho ephakeme futhi babe ubuso emgodini.
Siphendukela isondo up, cindezela inkinobho kwesokudla ngesikhathi esifanayo (esikhathini esizayo - strafe ngakwesokudla) nokuziphatha igundane ilungelo ke, okwesikhathi sesibili phambi kwezinyawo abadlali bethu uthinte phansi, ukusonta isondo up, kanyekanye cindezela strafe ingalo kwesokunxele bese beqhuba kwesobunxele. Impela wamane, into esemqoka ukubamba okwamanje, uma push off emhlabathini.
Sinikeza zonke ukunyakaza ngendlela idayagramu: gxuma - strafe sokunene + igundane ukuhamba ngakwesokudla - Jump - strafe kwesokunxele + igundane ukunyakaza kwesobunxele. Zonke lezi ukunyakaza aphindaphindwe umjikelezo ngaphandle kokuphazamiseka, uze uthole nesithukuthezi.
Into esemqoka - ukuba baqonde futhi athathe okwamanje, kuhlelembisa strafe negundane ukunyakaza. Uma kahle ke ukuqeqesha ngokwakho, konke kuyofika isikhathi. Ucije amakhono e raspyzhke Kunconywa ukuba khona banihop iseva ekhethekile ngalo abafake bhop ikhadi. Lezi amakhadi ezenziwe ngokhuni laminated, uhlanganyela emoyeni, okuyiwona onayo gxuma, kodwa noma kunjalo akunakwenzeka ukuyeka. Uma miss noma ayeke by tile kuso, khona-ke uqala nge yokuhlola.
Iphuzu lokugcina ongacabanga ukunakwa namuhla - nokuthile ababengambeka ungakwazi ukugxuma. Kufika kangcono ukuba siziphonse phansi sisuka isithunywa, njengoba lena zempi ezilula kakhulu (nenembe kakhulu), ungcono ngisho nangaphezu kwanoma ummese. Kodwa ochwepheshe ungenza raspryg ngisho ne AWP, into esemqoka - ukuqeqeshwa isifiso!
Ngithemba lesi sihloko eye yakusiza ukuba ufinyelele baxazulule kahle elula, kodwa kudinga ukunakwa umbuzo zendlela yokwenza bunny igxuma eKhotho yomThethosisekelo.
Okwengeziwe futhi amakhodi "GTA: San Andreas" I-Zombies
Indlela liderku e "Sampo" nganoma yisiphi ingxenyenamba?
"Dimexidum" futhi "Solkoseril" umbimbi: Uma imaskhi Ungashintshanisa Botox
Izimpawu ezingu-7 zokuthi uhlakaniphile kakhulu emsebenzini wakho
Imiqondo Jikelele mayelana ibhalansi: izimpahla, izikweletu,-balance sheet